रोचक Archives - Page7of9- Sadarline
Aug242018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
संसारको सबैभन्दा महंगो चिजको कुरा गर्दा सायद हीरा, प्लाटिनम आदि भन्नुहोला । तर यो दुनियाँमा हीरा तथा प्लाटिनमभन्दा कैयन गुणा धेरै महंगो एउटा वस्तु छ, जुन यति दुर्लभ हुन्छ कि एक ग्रामकै मूल्य सयौँ खर्ब रुपैयाँ पर्दछ । अर्थात् संसारको सबैभन्दा महंगो यो वस्तु एक ग्राम किन्नका लागि नेपालको झण्डै ३५ वर्षको कूल बजेट नै छुट्टाउनुपर्ने हुन्छ । एक ग्रामको झण्डै ५ सय खर्ब रुपैयाँ पर्ने दुनियाँकै सबैभन्द
Aug232018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
काठमाडौं । एप्पलले आफ्नो लोकपि्रय म्याकबुक एयर ल्यापटपलाई रिडिजाइन गरी नयाँ भर्सनमा ल्याउने भएको छ । उपभोक्ताको सस्तो मूल्यको ल्यापटपको चाहना पूरा गर्दै एप्पलले तीन वर्षपछि पछिल्लो ‘म्याकबुक एयर’मा महत्वपूर्ण अपडेट गर्न लागेको हो । ब्लुमबर्गका अनुसार एप्पलले सेप्टेम्बरमा नयाँ आइफोन सार्वजनिक गर्ने समारोह भन्दा पछि अक्टोबरमा नयाँ ‘म्याकबुक एयर’लाई सार्वजनिक गर्ने छ । पछिल्ला महिनाहरुमा
आफ्नो हराएको कुनै चिज भेटिँदा खुसी अवश्य लाग्दछ । हराएको चिज चाहे भेटिने खालको नहोस् तर भेटिने आशा लागिरहन्छ । यस्तोमा यदि भेटिने आशै मारेको कुनै विशेष चिज फ्याट्ट भेटियो भने कत्तिको खुसी मिल्ला ? अमेरिकाको जर्जियामा बस्ने रोय रोट्स नामका वृद्धको हकमा यस्तै भएको छ । उनले ७७ वर्षअघि हराएको एउटा पर्स हालै फेला पारेका छन् । पर्समा होइन, ऊबेला पर्ससँग हराएका महत्वपूर्ण कागजात पनि उनले जस्ताको जस्त
Aug212018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, भदौ ५, २०७५ |
घटना सन् १९९६ मा अमेरिकामा भएको हो । त्यस समय अमेरिकामा एकजना शिक्षिका निकै चर्चामा थिइन् । ३४ वर्षकी ती महिलाको नाम मेरी हो । उनी एक विद्यालयमा पढाउँथिन् । उनले पढाउने स्कुलमा एकजना १२ वर्षीय छात्रले पढ्थे । उनको नाम विली हो । मेरी र विलीबीच यतिधेरै सामिप्यता कायम भयो कि उनीहरु एकअर्काको प्रेममा परे । उनीहरुबीच यौन सम्पर्क पनि भएछ । झण्डै एक वर्षसम्मको शारीरिक सम्पर्कमा रहेका उनीहरुका विषयमा गा
Aug82018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तु किनबेच गर्नका लागि हाटबजार लाग्नु छ स्वभाविकै हो । तर चीनमा भने बिहे गर्नका लागि हाटबजार लाग्ने गर्दछ । सांघाइको पिपुल्स स्क्वाएरस्थित पिपुल्स पार्कमा केही वर्षदेखि एउटा अनौठो बिहे हाटबजार लाग्दै आएको छ । त्यो बजारमा बिहेका सामान होइन, बिहेको नाता अर्थात् जोडी उपलब्ध हुन्छ । सन् २००५ देखि यो हाटबजार लाग्दै आएको छ । हरेक शनिबार उक्त बजार लाग्ने गर्दछ । चाहे जाडो होस् व
Jul282018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
प्रकाशित मितिः शनिबार, साउन १२, २०७५ |
काठमाडौं । डिभोर्स गरेकी आफ्नी पूर्व पत्नीलाई पुरुषले दिने गुजारा अर्थात् मानाचामल बापतको रकम कति होला ? नाम नै गुजारा भत्ता भनेपछि त्यो सानो रकम नै होला भन्ने अनुमान हुन्छ । तर भारतमा एउटा यस्तो घटना भएको छ, जहाँ एकजना महिलालाई उनका पूर्व पतिले दिएको गुजारा भत्ताको रकम अदालतको इजलासमा दिनभर गन्दा पनि सकिएन । सायद दिनभर गन्दा पनि नसकिने भनेपछि त्यो रकम अर्बौँमा हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाउनु
Jul102018 by सदरलाइन संवाददाताNo Comments
दुई श्रीमतीको पोई कुनो बसी रोई भन्ने उखानलाई मान्ने हो भने कुनै पनि पुरुषले एकभन्दा बढी श्रीमतीलाई मिलाएर राख्न कठीन छ । तर यो दुनियाँमा एकजना यस्ता मानिस छन् जसले एकदुई जना होइन पूरै ६० जना पत्नीलाई मिलाएर राखेका छन् । आधुनिक युगमा समेत ६० वटी पत्नीका जोई हुनु कुनै चानचुने कुरा होइन । हुनत यी व्यक्ति पनि चानचुने कहाँ हुन् र ? उनी परे कोन्याक आदिवासी समुदायका राजा । उनको नाम अंग नगोवांग हो ।